Real Madrid oo Raphael Varane u bandhigaysa mid ka mid ah kooxaha Premier League & Man United oo ay xaaladdu ku xun tahay – Gool FM
(Madrid) 20 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay Raphael Varane u bandhigto Liverpool si ay wada xaajood uga gasho heshiiska ay kaga soo qaadanayso Sadio Mane.
Varane ayaa la fahamsan yahay inuusan fadhin mustaqbalkiisa caasimadda Spain, waxaana laga yaabaa inuu ka tago kooxda Los Blancos dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa la rumeysan yahay inuu u dhaqaaqi lahaa Manchester United, kuwaasoo la og yahay inay suuqa ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen daafac dhexe, isla markaana si aad ah loola xiriirinayay Varane waqtiyadii dhowaa.
Yeelkeede, Wargeyska The Guardian ayaa warinaya in Real Madrid ay doonayso inay Varane u soo bandhigto kooxda Liverpool si ay taasi uga caawiso wadahadallada ay ku doonayaan Mane.
Kooxda xafidanaysa Champions League ayaa xiiso weyn u qabta xiddiga xulka qaranka Senegal ee Mane kaddib markii uu kooxda dib ugu soo laabtay macallin Zinedine Zidane, Los Blancos ayaana ka fiirsanaysa weeraryahanka Liverpool inuu yahay fursad ka fiican Eden Hazard ama Christian Eriksen.
Manchester United ayaa xaaladdu ku xumaan kartaa haddii Varane uu aado Reds, taasoo suuqa xagaaga doonaysay inay difaacan reer France keento garoonka Old Traffrod.
Varane ayaa Real Madrid ku biiray sanadkii 2011-kii, waxaana uu kooxda reer Spain u saftay in ka badan 250 kulan tartammada oo dhan.
ARAG: Sida ay u muuqan doonto shaxda Man United kaddib mar ay ka soo dukaameysato suuqa xagaaga